သံစဉ်မဲ့ အလင်္ကာများ: နိုင်ငံသစ်
စာရေးသူ--> တပြည်သူ အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 12:54 AM
ကောင်းလှချည်းလား ဒေါင်းမြကြည်ရဲ့ ဆိုတဲ့ သြော်ဘာသံလိုပေါ့ နိုင်ငံသစ်ဆီသို့ မျှော်မှန်းရင်း ဖရဏာပီတိ ဂွမ်းဆီထိမိပါ၏။
ကဗျာ လေးက အသဲခိုက်ခိုက်ထိမိအောင် ခံစားရပါတယ်။
ကျွန်တော်ကိုတိုင်လည်း လူထုနဲ့ အတူ ရန်ကုန် မှာ လမ်းလျောက် နေဆဲပါ။ ကို နေမိုးရဲ့ရဲ့ ကွန့်မန်ကိုလည်း ထောက်ခံကြိုဆိုပါတယ်
A kari La Yeik Thar said...
After i read this poem, I am really really proud of you. It's give me lots of feeling. I'm so sorry that I'm so so far away from my country.
(Okanagan လွင်ပြင်ခရီး )